loharano misokatra - Websetnet
Open Power PowerShell an'ny Microsoft Open Source, mitondra azy any Linux!
Ny Microsoft sy Open Source dia tsy mahagaga ahy intsony. Rehefa nanambara i Microsoft voalohany fa hanokatra loharano. NET, dia taitra aho. Fa avy eo dia manokatra Visual Studio Code izy io, ny Chakra Core ary ny SQL Server Edge browser amin'ny tranokala maro toy izany. Ny farany …
Review Of Manjaro Linux - Tena mahagaga
Fanolorana Rehefa avy nandinika ny fizarana Netrunner Manjaro tamin'ny herinandro lasa teo aho dia nanapa-kevitra ny hanara-maso an'i Manjaro indray aho mba hahitako hoe hatraiza no nanatsara azy sy ny habetsaky ny Netrunner nanampy. Ny zavatra hitako dia tena mahatalanjona. Hanombohana aho amin'ny filazàna fa ny mason'i Manjaro dia nanenika ahy avokoa.
Hampiditra blender Ao amin'ny Ubuntu, Via Command Line
Fidio ny blender 2.77 amin'ny Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 ary Ubuntu 14.10 Systems. Ny mpamaky no loharanon-kevitra malalaka sy malalaka 3D. Manohana tanteraka ny fantsona 3D amin'ny famolavolana, fametahana, fampisehoana, simulation, famolavolana, fanangonana ary fanaraha-maso, na famoronana horonan-tsary sy famoronana lalao. ...
Manompa osCommerce amin'ny Debian 8
Alaivo sary an-tsaina ny toe-javatra iray izay manana vokatra goavana hivarotana sy fanentanana fanentanana efa misy, fa ny iray tsy hita dia tranokala eCommerce hivarotra ny vokatrao. Mazava ho azy fa efa nanao ny fahazotoanao ianao ary tsy tokony ho hita mazava izay ...
Hametraka tetikasa Agora ao amin'ny Ubuntu 14.04
Amin'ity lesona ity dia hasehontsika anao ny fomba hametrahana ny Tetikasa Agora amin'ny Ubuntu 14.04 VPS miaraka amin'ny Apache, PHP sy MySQL napetraka eo aminy. Ny tetikasa Agora dia loharano mivelatra sy vondrona mpampiasa namana mifototra amin'ny PHP sy MySQL izay mamela ny mpampiasa hamorona azy ireo.
Ampidino ny Ambians & Radiance Flat Colors Theme amin'ny Ubuntu Systems
Mametraka Ambiance & Radiance Flat Colors Theme amin'ny Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 ary Ubuntu 15.10 Systems. Ambiance & Radiance Flat dia fanavaozana maoderina, tsara tarehy ary mavitrika amin'ny fijerin'ny Ambians & Radiance Colour GTK 2 / 3 Themes. Manana toetrany maoderina, madio ary ...
Manantona Manager Manager amin'ny Double Commander Ao amin'ny Ubuntu, Via PPA
Mpandrindra fitantanana Double Commander ho an'ny Linux Ubuntu Systems. Manamboara mpitantana ny dossier double file ao amin'ny Ubuntu, amin'ny PPA - amin'ny Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 sy Ubuntu Derivatives. Double Commander (DoubleCMD) dia sehatra fitantanana ny sehatra open source ho an'ny Linux Ubuntu. Izy io dia miaraka amin'ny roa tonta ...
Ahoana no fametrahana e107 CMS amin'ny Ubuntu 14.04
e107 dia fampiharana amin'ny aterineto misokatra, voasoratra ao amin'ny PHP ary mampiasa ny rafi-drakitry ny angona rakitra malalaka misokatra ho an'ny rakitra ao amin'ny rakitra. Tena malalaka sy voafetra tanteraka izy io. Ny e107 CMS dia manome ny endri-javatra rehetra ilainao hananganana tranonkala fototra na fifanakalozan-kevitra tanteraka.
Ny fomba fanangonana Nylas N1 Open Source Mail Client ao amin'ny tranonkala maoderina
Hi All, anio dia hanangana mpanjifa mahafinaritra sy mahafinaritra amin'ny Linux Ubuntu 15 sy CentOS 7 Desktops izay antsoina hoe Nylas N1. Nylas N1 dia loharanom-baovao mivelatra amin'ny solosaina mivantana amin'ny GPLv3 izay noforonin'i Nylas. Ity ...
Ahoana ny fametrahana Concrete5 CMS amin'ny Ubuntu 15.04 / CentOS
Concrete5 dia loharanom-pifandraisana maimaim-poana sy open source nivoaka tamin'ny lisansa MIT. Natao ho an'ny famoronana sy fametrahana tranonkala ho mora ny mpampiasa manana fahaizana ara-teknika kely indrindra. Izy io dia mivoatra amin'ny PHP programming language izay manamboatra ny rindrambaiko interface sy tranonkala tranonkala.
Install & Upgrade Linux Lite 2.8; Nafahana tamin'ny Linux Kernel 3.19 & BTRFS Support
Midira ary ampidiro Linux Lite 2.8. Linux Lite 2.8 dia navoaka miaraka amin'ny Linux Kernel 3.19, ny BTRFS ary ny fanatsarana maro sy ny endri-javatra vaovao. Linux Lite dia mifototra amin'ny famoahana Ubuntu LTS. Linux sy Desktop ny lembalemba Linux dia tsotra sy tsotra. Miaraka amin'ny fidirana mora amin'ny ...
Mametraka Ghost miaraka amin'i Nginx amin'ny CentOS 7
Hametraka ny forum miniBB amin'ny CentOS 7
miniBB na Mini Bulletin Board dia PHP iray natsangana, loharanom-pifandraisana mivelatra ho an'ny fananganana ny sehatry ny aterineto manokana. Ao amin'io lesona io dia hametraka miniBB amin'ny CentOS 7 VPS miaraka amin'i Apache, PHP ary MariaDB. Mankanesa amin'ny serasera CentOS amin'ny SSH amin'ny ...
Fanaraha-maso Easy Docker Containers miaraka amin'i Panamax ao Ubuntu 15.10
Panamax dia tetikasa mivelatra ahafahana mametraka sy mizara ireo apps-be fitehirizana entana mora toy ny Drag-and-Drop miaraka amin'ny fomba tsara ampiasain'ny mpampiasa interface. Panamax dia manana aterineto mifototra amin'ny Internet izay mihazakazaka amin'ny tranonkala rehetra. Tena malalaka sy mivelatra tanteraka izy io.
Ahoana ny fametrahana ny fifandraisana 2.90 Bittorrent mpanjifa amin'ny Ubuntu Systems
Bittorrent mpanjifa amin'ny Ubuntu Linux. Ny famindrana 2.90 dia navoaka taorian'ny roa taona. Ahoana no hametrahana client Transmission 2.90 bittorrent amin'ny Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 ary Ubuntu 14.10 Systems. Ny fifindrana dia loharano misokatra, tetikasa mirotsaka an-tsitrapo. Tsy toy ny mpividy sasany BitTorrent, ny fandraketana dia tsy milalao lalao ...
Miam-player: Mozika Music Open Qt5
Miam-Player dia mpilalao horonan-tsarimihetsika mivantana ahafahana mampiasa ny tranokala media QtAv izay mifototra amin'ny Qt sy FFmpeg. Miezaka ny ho maika sy azo itokisana i Miam player. Azonao atao ny mamaky ny ankamaroan'ny format mozika rehetra: .mp3, .m4a (MP4), .flac, .ogg, .oga (OGG Vorbis), .asf, .ap (Monkey Audio), ...
Ahoana ny fametrahana ny lohapejy 1.6 Text Editor amin'ny Linux Ubuntu Systems
Ny Corebird Twitter Client 1.2 dia navoaka [Ahoana no hametrahana]
Corebird, loharanom-baovao loharanom-baovao malalaka ho an'i Linux, nahazo vaovao vaovao taorian'ny efa ho ny antsasaky ny taona fampandrosoana. Ny Corebird 1.2 vaovao dia mitondra fiovan'ny UI, fanatsarana ny show HDDI, ary bebe kokoa. Jereo ny changelog feno: Tsy tafiditra intsony ny fampahalalam-baovao sy ny avatars ...
Ahoana no fametrahana Pimcore amin'ny Ubuntu
Ao amin'ity lesona ity dia hasehontsika anao ny fomba fametrahana Pimcore amin'ny Ubuntu 14.04 VPS amin'ny PHP-FPM sy Nginx. Pimcore dia loharano mivelatra, votoatin'ny fitaovana sy ny vokatra. Izy io dia haingana, mavitrika, ary mpamorona sy mpandroso fanatanjahan-tena. Ity toro-lalana ity dia tokony hiasa amin'ny Linux VPS hafa.
Ahoana ny fametrahana ny Forum momba ny fifandraisana Elkarte momba ny Ubuntu 14.04
Amin'ity lesona ity dia hasehontsika anao ny fomba fametrahana ny Elkarte Community Forum amin'ny Ubuntu 14.04 VPS miaraka amin'ny Apache, PHP sy MySQL napetraka eo aminy. Elkarte dia sehatra fifanakalozan-dresaka mivelatra voasoratra ao amin'ny PHP izay ahafahan'ny mpikirakira web hamorona sehatra fiarahamonina manontolo ...
1 2 3 4 ... 20 Manaraka
Windows 8 HTML takelaka fikirakirana Plugin HTTPS Nginx fitaovana PHP Linux Mint Android endri-javatra CentOS lalao rafitra loharano misokatra Microsoft API GNOME Fitaovana finday WordPress lalao Apple Watch Windows Unité centrale afa-po Ubuntu 14.10 vaovao farany SSH Apache bilaogy raki-daza Database Windows 10 bilaogy toe-tsaina 10 app store SEO web server Google paoma tahirin-kevitra command line Linux fitaovana Ubuntu Ubuntu (rafitra fandidiana) fanamarinana rindrambaiko SSD Samsung Facebook Server Microsoft Windows Toetoetra HTTP ubuntu 15.04 'App Linux Ubuntu Systems One ' Ubuntu 16 fitaovana windows update PPA Phone YouTube famotsorana Malagasy Bible Command Support PDG USB fikarohana taona Up " Screen ram famerenana fifamoivoizana IP adiresy Company Plugins OS X nbsp Chrome File 04 "PC Time Bing Users Windows Phone Ubuntu 14.04 Rafitra fikirakirana Firefox Samsung Galaxy finday avo lenta MAMAKA CentOS 7 Cortana Debian web browser MySQL fitaovana finday Video haino aman-jery sosialy hametraka Twitter iPhone Apps Unix